विमानस्थलमा तस्कर पक्राउ पर्दा सिंहदरबारमा खैलाबैला - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
दीपक खरेल काठमाडौं चैत २५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मातहत रहेको विभागले उनैबाट कुनै बेला सम्मानित श्रेष्ठको निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी गर्छ? यो विषय पेचिलो बनेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर ब्यागेज लेमिनेसनको ठेक्का पाउँदै आएका सुवास श्रेष्ठ विदेशी मुद्रा तस्करीमा पक्राउ परेको विषयले शुक्रबार सत्तारूढ नेकपा, गृह प्रशासन, नागरिक उड्डयन एवं प्रहरी अधिकारीबीच हल्लीखल्ली मच्चियो।
श्रीमती, छोराछोरीसहित थाइल्यान्ड जान लाग्दा उनी २८ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका हुन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइएका दोलखा स्थायी ठेगाना (हाल मित्रपार्क) भएका श्रेष्ठ प्राधिकरण अधिकारीहरुले ‘अति विश्वास’ गरेका ठेकेदारमध्ये एक हुन्। विमानस्थलभित्र उनका चार अलग अलग व्यवसाय सञ्चालित छन्। विमानस्थलमा व्यापारका नाउँमा लिएका सटरहरूमार्फत उनले तस्करी धन्दा सञ्चालन गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
श्रेष्ठको कम्पनी स्वनिग सर्भिस प्रालिले २०६९ भदौ ७ देखि विमानस्थल सुरक्षा जाँच पार भएका यात्रुको लगेजमा लेमिनेसनको काम गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल प्रस्थान कक्षको भुइँतलाभित्र डिजी १४ नम्बरको कोठाबाट उनको व्यापार सञ्चालन हुन्छ।
रोचक पक्ष त यो छ कि ठेक्का अवधि सकिए पनि श्रेष्ठको कम्पनी विमानस्थलबाट बाहिरिएको छैन। अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर श्रेष्ठले विमानस्थलमको धन्दा लम्ब्याउँदै आएका छन्। विमानस्थल अधिकारीहरु श्रेष्ठप्रति नरम छन्।
प्रहरीले पक्राउ गरेका श्रेष्ठ हाल राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्। विभागले उनीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ।
शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सबै प्रक्रिया पूरा गरी श्रेष्ठ परिवार गेट नम्बर ५ मा पुगेका थिए। उनी त्यहीँबाट बाट पक्राउ परे। विमानस्थलको स्टेराइल एरिया (सुरक्षा शून्य) क्षेत्रसम्म उनी अवैध मुद्रासहित सहजै पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका अधिकारीले श्रेष्ठ परिवारलाई सबै प्रक्रिया र चेकजाँच पूरा गरी उड्ने तर्खरमा रहँदा नियन्त्रणमा लिएको थियो। श्रेष्ठले परिवार सदस्यसहितको लगेजमा पत्रिकाले बेरेर २७ लाख रुपैयाँ बराबरको डलर, युरो, चिनियाँ युआन र थाई भाट लिएर उड्न लागेका थिए।
विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलको भित्र–बाहिर ८ वटा भन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठानका सञ्चालक रहेका श्रेष्ठले सुरुमा आफूले नियमअनुसार प्रत्येक सदस्यले ५ हजार डलरका दरले २५ हजार डलर बराबर विदेशी मुद्रा बोकेको भन्दै विवाद गरेका थिए। श्रेष्ठले कानूनी आधार देखाएपछि ड्युटीमा रहेका प्रहरीले बिदा बसेका सुरक्षा प्रमुख एसएसपी सन्दिप भण्डारीलाई बोलाएका थिए।
एसएसपी भण्डारी आउनुअघि श्रेष्ठले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुसम्मलाई फोन गरिसकेका थिए। पक्राउको २ घण्टाभन्दा बढीसम्म पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिने वा नलिने विषयमा प्रहरी निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। यो बीचमा प्रहरीले सोधपुछ गर्दै समय ब्यतित गरेको थियो। श्रेष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका पनि विश्वासिला मित्र हुन्।
सुवास पक्राउको खबर गृहसचिव प्रेमकुमार राईसम्म पुगेपछि यसले नयाँ मोड लियो। सचिव राईले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई टेलिफोन गरी यो विषयको कानूनी आधार र कारबाहीबारे परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
‘केही समय नोटका नम्बर गनेर मुचुल्का बनाउन ढिला भएको हो,’ विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख एसएसपी सन्दिप भण्डारीले नेपालखबरसँग भने ‘कानूनी द्वुविधाले समेत केही समय अल्मलाएको हो।’
लहरो तान्दा पहरो गर्जने खतरा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतबारदेखि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर श्रेष्ठको विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मातहत रहेको विभागले उनैबाट कुनै बेला सम्मानित श्रेष्ठको निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी गर्छ? यो विषय पेचिलो बनेको छ। नेकपा निकट मानिएका उनी विगतमा ओलीबाट सम्मानित व्यापारी हुन्।
‘हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका छौं, सवै विवरण र आवश्यकताअनुसार परिवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँग समेत सोधपुछ हुनेछ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नेपालखबरसँग भने ‘कुनै दबाब छैन। कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।’
पाँच दिनको हिरासत म्याद लिएको विभागले आवश्यक परे श्रेष्ठको मोबाइल कल डिटेल समेत मगाएर अनुसन्धान गर्नेछ। श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढेमा उनले विमानस्थलमा संचालन गरेका ब्यवसायिक प्रतिष्ठान र ठेक्काका आडमा भइरहेको तस्करीको ठुलो सञ्जाल पर्दाफास हुनेछ।
दोलखा स्थायी ठेगाना भएका सुवास श्रेष्ठ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर बाहिरिने भिभिआईपी आगन्तुकका लागि परिचित नाम थियो। शक्तिकेन्द्र रिझाउन सिपालु उनी बिचौलियाहरुका पनि प्रिय पात्र हुन्। प्रहरीले शुक्रबार अपरान्ह श्रेष्ठलाई हत्कडी लगाउने तयारी गरिरहँदा उनको पक्राउलाइ लिएर धेरै उच्चपदस्थ अत्तालिए।
‘उनी पक्राउ परेपछि धेरै ठाँउबाट सोधखोज भयो, कानूनी रुपमा मिल्दै नमिल्ने भएपछि प्रहरीले राजस्वमा बुझाएको हो,’ स्रोतले भन्यो ‘सुरुमा विमानस्थल प्रहरीलाई श्रेष्ठले अनेकन आधार तथा दवाब दिएर छुट्न खोजेका थिए। सम्भव नभएपछि पक्राउ परेका हुन्।'
विमानस्थलभित्र ठूलो सञ्जाल
श्रेष्ठ सञ्चालक रहेका ४ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्थान टर्मिनल भित्र संचालनमा छन्। सुरक्षा र भन्सार जाँच लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर पुगिने ती स्थानमा उनलाई क्याफे सञ्चालनको जिम्मेबारी उड्डयन प्राधिकरणले दिएको छ। प्रहरीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिनु अघिसम्म सुवासका विषयमा अनेक हल्लाहरु चलेका थिए।
सुवासलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रमिनलको प्रस्थान तर्फ पहिलो तलामा रहेको कोठा नम्बर डिएफ ३, डिएफ १२ र डिएफ १४ को ठेक्का पनि दिइएको छ। यी तीनवटै ब्यवसायीक प्रतिष्ठान सुरक्षाका दृष्टीकोण अति सम्बेदनशील क्षेत्रमा सञ्चालित छन्। उनले नेपाली ह्याण्ड क्रिएटिभ नेपाली प्रोडक्ट प्रस्थान तर्फ पहिलो तलामा सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले २०६७ जेठ ११ मा श्रेष्ठसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो। भाडा शुल्क नतिरी उच्च अदालतबाट २०७४ साउन २५ मा रिट जारी भएर संचालनमा रहेको यो प्रतिष्ठानमा नेपाली उत्पादनको बजार प्रर्वद्धन र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि संचालन गरिएको दाबी सरकारी पक्षको छ।
यस्तै पहिलो तलामै श्रेष्ठले उपहार पसल सञ्चालनमा छ। यसका लागि प्राधिकरण र श्रेष्ठको स्वनिग सर्भिस प्राली बिचमा २०७१ फागुन २२ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। यस्तै श्रेष्ठकै होटल स्वनिगका नामले प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएको कफि स्टल एण्ड स्न्याक बार प्रस्थान कक्षकै पहिलो तलामा सञ्चालित छ। श्रेष्ठका यी सबै व्यापारिक केन्द्रले सम्झौता बमोजिम भाडा तिरेका छैनन्। विमानस्थलस्थित उड्डयन कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता एवं न्यायाधीश सेटिङका भरमा उनको यो धन्दा चल्दै आएको छ।
प्रकाशित २५ चैत २०७५, सोमबार | 2019-04-08 22:38:34